Gaadi Gaashaaman oo Amisom Looga Gubay Muqdisho, Sarkaal Lagu Dilay Balcad Iyo Cabdi Bile Lagu Gubay Dukeedka Xamar. – Shabakadda Amiirnuur
May 29, 2019 1:25 pm by admin Views: 122
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo ciidamada shisheeyaha AMISOM lagula beegsaday waqooyiga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Wararka laga helayo xaafadda Suuqa Xoolaha degmada Huriwaa ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay mid kamida gaadiidka gaashaaman ee ciidamada AMISOM xilli uu ku socdaalayay isgoyska Ex.control Balcad.
Qaraxa ayaa gabi ahaanba burburiyay gaariga waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dhammaan ciidamadii la socday, qof goob jooge ah ayaa SomaliMeMo u sheegay in uu arkay gaariga oo ku gubanaya wadada laamiga ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in kolonyada AMISOM ay socodkeeda iskasii wadateen iyadoona gaariga gubtay ay goobta uga tageen arrinkaas oo muujinaya in ciidamada shisheeye ay ku daaleen kuna jabeen dagaalka 12 sana jirsaday oo ay uga jiraan dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale gaari Tikinika ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka dowladda Federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaan Bangaraafta ayaa qarax lagula eegtay deegaanka Weydoow ee galbeedka magaalada Muqdisho.
Dhanka kale qarax xooggan oo saaka ka dhacay duleedka Balcad ayaa sababay dhimashada sarkaal sare oo katirsan ciidamada dowladda Dowladda, Jiinoow Cigaal oo kamid ahaa saraakiisha ugu caansan ciidamada dowladda Sh/dhexe ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhitay lala helay kolonyo gaadiid ah.